Marpipe- စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား ၎င်းတို့စမ်းသပ်ပြီး အနိုင်ရရှိသော ကြော်ငြာဖန်တီးမှု | Martech Zone
Marpipe- စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား ၎င်းတို့စမ်းသပ်ပြီး အနိုင်ရရှိသော ကြော်ငြာဖန်တီးမှုကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်သော ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 22, 2021 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 22, 2021 Dan Pantelo
နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့် ကြော်ငြာသူများသည် ၎င်းတို့၏ ကြော်ငြာဖန်တီးမှုအား မည်သည့်နေရာနှင့် ရှေ့တွင် လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိရန် ပရိတ်သတ်ကို ပစ်မှတ်ထားသော ဒေတာအပေါ်တွင် မှီခိုနေခဲ့ရသည်။ သို့သော် GDPR၊ CCPA နှင့် Apple ၏ iOS14 တို့မှ အသစ်ပြဌာန်းထားသော လိုအပ်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစည်းမျဉ်းအသစ်များ၏ ရလဒ်ဖြစ်သော ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဒေတာတူးဖော်ခြင်းအလေ့အကျင့်များမှ မကြာသေးမီက အပြောင်းအလဲသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များ အရှုပ်အထွေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ခြေရာခံခြင်းမှ ရှောင်ဖယ်အသုံးပြုသူ ပိုများလာသည်နှင့်အမျှ၊ ပရိသတ်ကို ပစ်မှတ်ထားသော ဒေတာသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု လျော့နည်းလာပါသည်။
စျေးကွက်ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်- ၎င်းတို့၏ ကြော်ငြာဖန်တီးမှု၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းအရာတစ်ခုဆီသို့ အာရုံပြောင်းသွားခဲ့သည်။ A/B စမ်းသပ်ခြင်းသည် ကြော်ငြာများ၏ ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းအားကို တိုင်းတာခြင်းအတွက် စံဖြစ်သော်လည်း၊ ယခု ဆန်းသစ်တီထွင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် ကြော်ငြာဖန်တီးမှုကို တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အမျိုးမျိုးကွဲပြားသော စမ်းသပ်ခြင်းစကေးဖြင့် ရိုးရာနည်းလမ်းများထက် ကျော်လွန်သွားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
Marpipe ဖြေရှင်းချက် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Marpipe တီထွင်ဖန်တီးမှုအဖွဲ့များနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ရာနှင့်ချီသော ကြော်ငြာမျိုးကွဲများကို ဖန်တီးနိုင်စေရန်၊ စမ်းသပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ပရိသတ်များထံ အငြိမ်ရုပ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုဖန်တီးမှုကို အလိုအလျောက် ဖြန့်ကျက်ပြီး ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပိုင်းခြားထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရယူနိုင်သည် — ခေါင်းစီး၊ ရုပ်ပုံ၊ နောက်ခံအရောင် စသည်ဖြင့်။
နှင့် Marpipeအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အေဂျင်စီများ လုပ်နိုင်သည်-
စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ထူးခြားသောကြော်ငြာဖန်တီးမှုအရေအတွက်ကို အလွန်တိုးစေပြီး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သူများကို ရှာဖွေရန် အခွင့်အလမ်းများကို များစွာတိုးစေသည်
ပြောင်းလဲခြင်းဒေတာဖြင့် ဒီဇိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်းဖြင့် ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ ဘက်လိုက်မှုများကို ဖယ်ရှားပါ။
မည်သည့်ကြော်ငြာများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်နေသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုထက်မြက်လာစေရန်နှင့် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် မည်သည့်ကြော်ငြာဖန်တီးမှုအား အတိုင်းအတာနှင့် ပိတ်ရမည်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်
အချိန်တစ်ဝက်ထက်နည်းသော ကြော်ငြာများကို ဖန်တီးပါ — ပျမ်းမျှအားဖြင့် 66% ပိုမြန်သည်။
Marpipe နှင့် ရိုးရာဖန်တီးမှုစမ်းသပ်ခြင်း။
အစဉ်အလာအရ၊ ဖန်တီးမှုအဖွဲ့များသည် စမ်းသပ်ရန်အတွက် ကြော်ငြာနှစ်ခုမှ သုံးခုအထိ အယူအဆနှင့် ဒီဇိုင်းဆွဲရန် bandwidth ရှိသည်။ Marpipe ၎င်းတို့ကို အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး ကြော်ငြာဆယ်ခု သို့မဟုတ် ရာပေါင်းများစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။ ဖန်တီးမှုအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှုတိုင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ကြော်ငြာမျိုးကွဲများသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ပေါင်းထည့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခေါင်းစီးငါးခု၊ ပုံသုံးပုံနှင့် နောက်ခံအရောင်နှစ်ခုသည် ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ရုံဖြင့် ကြော်ငြာ 30 (5x3x2) ဖြစ်လာသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ထူးခြားသောကြော်ငြာဖန်တီးမှုအရေအတွက်ကို တိုးလာစေရုံသာမက၊ Marpipe ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အမျိုးမျိုးကွဲပြားသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရန် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကို တပ်ဆင်ပေးသည် — ဖြစ်နိုင်သည့်ဖန်တီးမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကို ထိန်းချုပ်နေစဉ် ကြော်ငြာပုံစံကွဲများအားလုံးကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြတ်တောက်ထားသည်။
ဖြစ်နိုင်သမျှ ကြော်ငြာပေါင်းစပ်မှုများအားလုံးကို အလိုအလျောက်တည်ဆောက်ပါ။
အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ထားသော စမ်းသပ်မှု စနစ်ထည့်သွင်းမှု
ကြော်ငြာအမျိုးအစားအားလုံးကို အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးပြီးသည်နှင့်၊ Marpipe ထို့နောက် multivariate testing ကို အလိုအလျောက်လုပ်သည်။ Multivariate testing သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပေါင်းစပ်မှုတိုင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာသည်။ Marpipe ၏အခြေအနေတွင်၊ ကွဲပြားမှုများသည် ကြော်ငြာတစ်ခုစီရှိ ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဒြပ်စင်များဖြစ်သည် — မိတ္တူ၊ ပုံများ၊ လုပ်ဆောင်ရန် တောင်းဆိုမှုများနှင့် အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာတိုင်းကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာအစုတွင် ထည့်သွင်းထားပြီး ရလဒ်များကို လှည့်စားနိုင်သည့် အခြားကိန်းရှင်ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ကြားတွင် စမ်းသပ်ဘတ်ဂျက်ကို အညီအမျှ ခွဲဝေပေးပါသည်။ ဖောက်သည်တစ်ဦး၏ဘတ်ဂျက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များပေါ် မူတည်၍ စမ်းသပ်မှုများသည် ခုနစ်ရက် သို့မဟုတ် ၁၄ ရက်အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကြော်ငြာပုံစံကွဲများသည် ဖောက်သည်၏ရှိရင်းစွဲပရိသတ် သို့မဟုတ် ပရိသတ်များရှေ့တွင် လည်ပတ်စေပြီး ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Multivariate စမ်းသပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မောင်းနှင်ပြီး ကိန်းရှင်အားလုံးကို ထိန်းချုပ်သည်။
စာမေးပွဲတွေ အောင်တော့ သူတို့ရဲ့ သင်တန်း၊ Marpipe ကြော်ငြာတစ်ခုစီအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာအပြင် တစ်ဦးချင်းစီ ဖန်တီးမှုအပိုင်းတစ်ခုစီအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာကို ပေးဆောင်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် လက်လှမ်းမီမှု၊ ကလစ်နှိပ်မှု၊ ပြောင်းလဲမှုများ၊ CPA၊ CTR နှင့် အခြားအရာများကို ခြေရာခံသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ Marpipe သည် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ဤရလဒ်များကို စုစည်းသည်။ ဤနေရာမှ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့် ကြော်ငြာသူများသည် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ မည်သည့်ကြော်ငြာများကို စကေးချရန်နှင့် မည်သည့်အရာကို စမ်းသပ်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ပလပ်ဖောင်းသည် သမိုင်းဆိုင်ရာ ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ကို အခြေခံ၍ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု စမ်းသပ်သင့်သည့် ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများကို အကြံပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်း ကြော်ငြာများနှင့် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ရှာဖွေပါ။
Marpipe ၏ 1:1 ခရီးစဉ်ကို ကြိုတင်မှာယူပါ။
Multivariate Ad Creative Testing အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ
အတိုင်းအတာဖြင့် အမျိုးမျိုးကွဲပြားသောစမ်းသပ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်ဖြစ်ပြီး၊ အလိုအလျောက်စနစ်မပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤနည်းဖြင့် ကြော်ငြာဖန်တီးမှုကို စမ်းသပ်ရန် လိုအပ်သော အလုပ်အသွားအလာနှင့် အတွေးအမြင်များကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ကျင့်သုံးခြင်းမရှိသေးပါ။ Marpipe သည် ၎င်း၏ အအောင်မြင်ဆုံး ဖောက်သည်များသည် အထူးသဖြင့် ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ တန်ဖိုးများကို စောစောစီးစီး သိမြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့် နှစ်ခုကို လိုက်နာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ကြော်ငြာဒီဇိုင်းအတွက် modular ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးခြင်း။ မော်ဂျူလာဖန်တီးမှုသည် အပြန်အလှန်အမှီသဟဲပြုနေထိုင်နိုင်ရန် ဖန်တီးမှုဒြပ်စင်တစ်ခုစီအတွက် နေရာချထားပေးသည့် အထဲမှာ ပုံစံပလိတ်တစ်ခုဖြင့် စတင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခေါင်းစီးအတွက် နေရာတစ်ခု၊ ပုံတစ်ခုအတွက် နေရာတစ်ခု၊ ခလုတ်တစ်ခုအတွက် နေရာတစ်ခု စသဖြင့်။ ဖန်တီးမှုတစ်ခုစီ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး အလှတရားရှိရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤနည်းဖြင့် စဉ်းစားခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖန်တီးမှုဒြပ်စင်။ ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အပြင်အဆင်သည် ဖန်တီးမှုဒြပ်စင်တစ်ခုစီ၏ ကွဲပြားမှုတစ်ခုစီကို ပရိုဂရမ်ပုံစံဖြင့် ဖလှယ်နိုင်စေပါသည်။
ဖန်တီးမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကြား ကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးခြင်း။ lockstep တွင်အလုပ်လုပ်သောဖန်တီးမှုအဖွဲ့များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်းများသည်ဆုလာဘ်များကိုစုဆောင်းလေ့ရှိသည်။ Marpipe မြန်မြန်။ ဤအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ စာမေးပွဲများကို အတူတကွ စီစဉ်ကြပြီး အားလုံးသည် ၎င်းတို့ သင်ယူလိုသော အရာများနှင့် မည်သည့် ဖန်တီးမှု ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ထိုနေရာသို့ ရောက်စေမည် အကြောင်း တူညီသော စာမျက်နှာတွင် ရောက်ရှိလာကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ကြော်ငြာများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို မကြာခဏသော့ဖွင့်ပေးရုံသာမက၊ စမ်းသပ်မှုတိုင်းတွင် နက်နဲသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများရရှိရန် ကြော်ငြာဖန်တီးမှု၏နောက်ထပ်တွင် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုလည်း အသုံးချပါသည်။
Marpipe ၏ ဖောက်သည်များသည် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို ယခုလုပ်ဆောင်ရမည့် ကြော်ငြာဖန်တီးမှုကို နားလည်စေရုံသာမက နောက်စမ်းသပ်ရန် ကြော်ငြာဖန်တီးမှုကိုလည်း ကူညီပေးပါသည်။
အမျိုးသားအ၀တ်အထည်အမှတ်တံဆိပ် Taylor Stitch သည် Marpipe ဖြင့် ၎င်း၏ကြီးထွားမှုပန်းတိုင်များကို 50% ဖြင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီ၏ အထက်သို့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ အရေးကြီးသော အခိုက်အတန့်တွင် မားကတ်တင်းအဖွဲ့ မှာ ရှိနေသည်။ တေလာချုပ် တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှစ်ခုစလုံးတွင် လှိုင်းနှုန်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ၎င်းတို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ စူပါစွမ်းရည်ရှိ ဒီဇိုင်နာများနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကြော်ငြာအေဂျင်စီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးတို့နှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ ဖန်တီးမှုစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ရှည်လျားပြီး ပျင်းရိဖွယ်ကောင်းပါသည်။ စမ်းသပ်ခြင်း၊ အပ်လုဒ်တင်ရန်အတွက် အေဂျင်စီသို့ ပေးပို့ခြင်း၊ ပရိသတ်များကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် စတင်ခြင်းအတွက် ကြော်ငြာများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် လွယ်ကူစွာ နှစ်ပတ်ကြာပါသည်။ ဖောက်သည်အသစ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ပြင်းထန်သောရည်မှန်းချက်များ - 20% YOY - Taylor Stitch အဖွဲ့သည် ဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်များကြီးမားစွာတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ကြော်ငြာစမ်းသပ်မှုအား အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နည်းလမ်းရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Marpipe ကြော်ငြာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Taylor Stitch သည် စမ်းသပ်မှုအတွက် ၎င်း၏ထူးခြားသောကြော်ငြာဖန်တီးမှုအရေအတွက်ကို 10 ဆ တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့သည် ယခု တစ်ပတ်လျှင် ဖန်တီးမှု စမ်းသပ်မှု နှစ်ခုကို စတင်နိုင်ပါပြီ — တစ်ခုစီတွင် ထူးခြားသော ကြော်ငြာမျိုးကွဲပေါင်း 80 ကျော်ပါရှိပြီး၊ အားလုံးသည် ဖောက်သည်သစ်များကို ရှာဖွေရန် တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အသစ်တွေ့ရှိသည့်စကေးသည် ၎င်းတို့အား ထုတ်ကုန်လိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့ ယခင်က မရနိုင်ခဲ့ဖူးသော ဖန်တီးမှုပုံစံများကို စမ်းသပ်နိုင်စေပါသည်။ ဖောက်သည်အသစ်များသည် လျှော့စျေးများထက် ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် အထည်အရည်အသွေးအကြောင်း စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ခြေပိုများသည်ဟူသောအချက်ကဲ့သို့ အံ့အားသင့်စရာကောင်းသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့ သူတို့ ၎င်းတို့၏ YOY တိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များကို 50% ဖြင့် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။.
Marpipe Case Study အပြည့်အစုံကို ဖတ်ပါ။
Tags: ကြော်ငြာဖန်တီးမှုအသိဉာဏ်ကြော်ငြာဒီဇိုင်းကြော်ငြာထောက်လှမ်းရေးကြော်ငြာစမ်းသပ်ခြင်း။ကြော်ငြာထောက်လှမ်းရေးကြော်ငြာစမ်းသပ်ခြင်း။အလိုအလျောက်စမ်းသပ်ခြင်းကြော်ငြာစမ်းသပ်ပြသခြင်း။ကြော်ငြာစမ်းသပ်ပြသခြင်း။Facebook ကြော်ငြာမန်နေဂျာကြော်ငြာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်marpipemodular ကြော်ငြာဒီဇိုင်းmultivariate စမ်းသပ်ခြင်းတေလာချုပ်ရိုးစမ်းသပ်ခြင်းဥာဏ်စမ်း
Dan သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာအမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တည်ထောင်သူ/အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။ Marpipe. Marpipe ကို မတည်ထောင်မီတွင် Dan သည် DTC စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် လိုအပ်ချက်မျိုးဆက်များအတွက် အထူးပြုသည့် Soho၊ Manhattan တွင် အခြေစိုက်သည့် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသော အေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည့် သူ၏အဆောင်ခန်းမှ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြံပေးလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ Marpipe သည် ဖန်တီးမှုစမ်းသပ်မှုတွင် အေဂျင်စီမှ ပြဿနာတက်သောအခါတွင် အစပိုင်းတွင် တီထွင်ခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် Marpipe သည် Adobe၊ Samsung နှင့် Buzzfeed၊ Hubspot၊ MediaMath နှင့် Criteo တို့မှ အမှုဆောင်အရာရှိများထံမှ ဒေါ်လာ 10 သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။
B2B E-Commerce Personalization ကြောင့် ဝယ်ယူသူများသည် အဘယ်ကြောင့် လွှမ်းမိုးခံနေရသနည်း (နှင့် ၎င်းကို မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ရမည်)